Ismaaciil Xaaji Nuur oo Markii labaad si sharci ah loogu Doortay Maayarka Ceerigaabo | Somaliland.Org
Ismaaciil Xaaji Nuur oo Markii labaad si sharci ah loogu Doortay Maayarka Ceerigaabo
December 23, 2012	Ceerigaabo (Somaliland.Org)- Golaha Deegaanka ee degmadda Ceerigaabo ee gobolka Sanaag, ayaa maanta fadhigoodii u horeeyay ku yeeshay xarunta dawladda Hoose ayaa cod aqlabiyad ah dib ugu doortay Maayarka cusub ee magaaladaasi Ismaaciil Xaaji Nuur Faarax oo muddo toban sanadood ah xafiiskaasi haystay.
Fadhigan oo ay ka soo xaadireen dhammaan 21-ka Xildhibaan ee Golaha deegaanka Ceerigaabo ka kooban yahay, waxa halkaasi Maxkamadda Gobolka Sanaag ku dhaarisay Xildhibaanadda la soo doortay ee Golaha deegaanka Ceerigaabo.
Maayarka degmadda Ceerigaabo waxa uu helay 11 Xildhibaan, halka Murashaxii kale ee la tartamayay oo magaciisa la yidhaahdo Jaamac Jibriil Jaamac uu helay 7 cod oo kaliya.
Maayarka degmadda Ceerigaabo waxa isna loo doortay Saalax Ismaaciil Cabaase oo aanay cidi la tartamin waxa markii loo codaynayay fadhiyay 13 Xildhibaan, waxaana ogolaaday 11 Xildhibaan, halka laba xubnood oo kale ay ka aamuseen.
11 xubnood oo ka mid ah 21-ka Xildhibaan ee Ceerigaabo ayaa todobaadkii hore Maayar iyo ku xigeen u kala doortay labadan xubnood ee ay maantana dib loo doortay, hase yeeshee. Waxa doorashadaasi lagu tilmaamay mid sharci darro ah oo ay is doorteen iyagoo aan la dhaarin isla markaana aanu goob joog ka ahayn badhasaabkii Gobolka Sanaag.
Previous PostCalasow, budhcad degelo markhaati beenaad badan.Next PostCadaymo ku wajahan wararka been abuurka ah ee laga faafiyay dugsiga Abaarso Tech	Blog